27 | July | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
VERY SERIOUS ALLEGATION against Myanmar Government must be explained with firm action on TERRORISTS who attacked Muslims in different parts of Myanmar
“The regime-owned killing machine relentlessly works on striking Muslims in different regions, with Rohingya at the forefront...This isanew racial purification trend against Muslims.”
This isaVERY SERIOUS ALLEGATION. Myanmar Government should not only deny but need to take action on those Master-minds of the killing machines that was activated round about By election time. Whether right or wrong it really stroke Myanmar Muslims in different regions. Main stream media cover-up, gov failed to act or protect the5Muslim organizations’ official complaints.
If Hmu Zaw, U Thein Sein and Government failed to act on the “Killing Machine” the world would WRONGLY regard or suspect that they were behind that machine or agree to or protecting that RADICAL TERRORIST group. FIRST of all they need to stop the HATE SPEECHES by the Media and Monks.
မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ (၃) နိဂုံးအပိုင်း
Source: မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ (၃) နိဂုံးအပိုင်း
ဗြိတိသျှ တို့က မြန်မာ နိုင်ငံကို အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမဏီ ဖြင့်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတို့၏ ရှေ့တန်း တိုက်ခိုက် စစ်သား အများစုမှာ အိန္ဒိယ စစ်သားများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ဗြိတိသျှတို့ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဗြိတိသျှ ပိုင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် ထားရှိခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းသို့ အိန္ဒိယ သား များအလုံးအရင်း ဖြင့် ၀င်ရောက်လာတော့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော စစ်သားများ တွင် လည်းကောာင်း ၊ မြန်မာပြည်နယ် အတွင်း ၀င်ရောက်လာသော အိန္ဒိယ သားများတွင် လည်းကောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလည်း ပါဝင်လာပါသည်။ (more…)
အာဆီယံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် မူစလင် ဆက်ဆံရေး
အာဆီယံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် မူစလင် ဆက်ဆံရေး Source: ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး တစ်ဦး၏ မွတ်စလင်များ အပေါ် မှားယွင်းနေသော ထင်မြင်ချက်များအား ဖြေရှင်းချက် အပိုင်း ၂
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အီစလံဘာသာဝင်များကို အထူးအရေးပေးခြင်းခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင် ဘက်ရှိ ပတ္တာနီ နရသီဝ ရဟေ ဟူ၍ ပြည်နယ်သုံးခုတွင် မူစလင် အများစု ရှိသည်။ ထိုင်းဘုရင် သည် မူစလင် တို့၏ ဘာသာရေးဂိုဏ်ချုပ်ကို တိုက်ရိုက်ခန့်ပေးသည်။ ဂိုဏ်းချုပ် သည် အာဏာ အပြည့်အ၀ ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကက် ဘိနက် တွင်ဝန်ကြီး ၃ ၄ ဦးမှာ အစဉ်အမြဲမွတ်စလင် ကိုခန့်လေ့ရှိသည်။ (more…)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး တစ်ဦး၏ မွတ်စလင်များ အပေါ် မှားယွင်းနေသော ထင်မြင်ချက်များအား ဖြေရှင်းချက် (၁)
Source: ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး တစ်ဦး၏ မွတ်စလင်များ အပေါ် မှားယွင်းနေသော ထင်မြင်ချက်များအား ဖြေရှင်းချက် (၁)
မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်း စုံငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေ ထိုင်ကြသောနိုင် ငံဖြစ်သည်။ ရှေးမြန်မာ မင်းများ လက်ထက် တွင်လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ် ကျူးကျော် စစ်ပွဲများ တွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်း မှုသမိုင်းတွင် လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး ကာလ၊အိမ်စောင့် အစိုးရလက်ထက်၊ တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက် နှင့်ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ကာလများတွင် လည်းကောင်း ဘာသာဝင် အသီးသီးတို့သည် ကျရာနေ ရာမှ နိုင်ငံအကျိုး၊ ပြည်သူ့ အကျိုး ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လူအများစုဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ လူနည်းစုဖြစ်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာမွတ်စလင် တို့သည် လက်ချင်းချိတ်ကာ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အကျိုး ရလာဒ် အဖြစ် တည်ငြိမ်သော၊ငြိမ်းချမ်းသော ၊ ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်သော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် မကြာခင်နှစ် များတွင် တက်လှမ်းပါတော့မည်။ (more…)
နိုင်ငံတစ်ခုကို စည်းလုံးညီညွတ်မှုများနဲ့ အခြေခံပြီး စနစ်တကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်လိုတဲ့ နိုင်ငံချစ်သူ တိုင်းဟာ- မိမိနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်တည်လာတဲ့ သမိုင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး အမှန်အတိုင်း သိဘို့၊ လက်ခံဘို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ သမိုင်းမှန်ကို သိမှ- ဘယ်ခေတ် ဘယ်ဘုရင်လက်ထက်က ကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ ငါတို့ တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ အတုယူနိုင်သလို-၊ ဘယ်ခေတ် ဘယ်ဘုရင်လက်ထက်က မကောင်းမှုများနဲ့ အာဏာပြခဲ့လို့ ငါတို့တစ်တွေ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်- လို့ သင်ခန်းစာယူနိုင်ပြီး- ကောင်းတဲ့ဘက်ကို အတုယူပြီး နိုင်ငံကို တည် ဆောက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ (more…)
Request the World Muslims to “stop” wild accusation and to visit Myanmar to know the truth
Dear World Muslims,
The Communal Riots in our country is not because of race-religion or conflict between Islam and Buddhism. This is the problem between Buddhist Rakhines and Muslim Rohingyas only.
In Myanmar, we have “full” rights of religious freedom.
However the Masjids closed down (damaged due to multiple anti-Muslim riots within last few decades) are not allowed to repair, renovate and we are denied praying there.
Source: Burma’s monks call for Muslim community to be shunned ByHanna Hindstrom
မြန်မာမွတ်စလင်များအား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဘဦးပေးပို့ခဲ့ဖူးသော သ၀ဏ်လွှာ
၁၉၅၆-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈-ရက်နေ့မှ ၃၀-ရက်နေ့အထိ၊ မိတ္ထီလာမြို့၌ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ၏ ပဌမအကြိမ်မြောက် ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံသို့ မင်္ဂလာဖြာဖြာနှင့်ပြည့်စုံသော ဤသ၀ဏ်လွှာကို ကျွန်ုပ် ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ပေးပို့ပါသည်။